Scoutmob: Fifanarahana eo an-toerana | Martech Zone
Scoutmob: Fifanarahana eo an-toerana amin'ny fotoana tena izy
Alarobia, Martsa 28, 2012 Talata, Martsa 27, 2012 Douglas Karr
Misy ny fanehoan-kevitra mifangaro ao amin'ny indostrian'ny fifanarahana isan'andro izay ny fanaintainan'ny fihenam-bidy be loatra dia saika nanapotika ny sasany tamin'ireo orinasa nampiasa ny serivisy. Scoutmob toa manao zavatra somary hafa kely, manome vahaolana ara-potoana sy karama ho an'ny orinasa. Scoutmob dia fampiharana zaraina amin'ny mpanjifa amin'ny Android, iPhone ary Blackberry izay ahafahan'ny olona miditra sy manamarina fifanarahana iray, saingy mampiasa azy io rehefa vonona izy ireo.
Avy amin'ny Scoutmob Pejy FAQ:
Inona no mahasamihafa ny Scoutmob amin'ireo tranokala "mividy vondrona" ireo? Ny Scoutmob dia mitovy amin'izy ireo amin'ny lafiny sasany, fa tena hafa amin'ny hafa. Toy ireo tranokala ireo dia manome mailaka miaraka aminay isan'andro izahay ary misy mandritra ny 24 ora. Saingy tsy toa an'ireo tranokala “mividy vondrona” any, tsy mila fandoavam-bola mialoha amin'ireto mpanjifa ireto izahay, ka azonao atao ny mitazona bebe kokoa ny vola azonao. Manome tosika bebe kokoa handinika ny safidin'izy ireo izany. Ankoatr'izay, ny sehatray finday dia mandrisika ireo mpanjifa mandoa vola hiverina amin'ny asa indray. Izahay ihany koa dia miompana amin'ny orinasa eo an-toerana, noho izany ny marikao dia anisan'ny tsara indrindra atolotry ny tanànanao.
Inona no atao hoe fifanarahana mahazatra? Ny majika amin'ny fifanarahana "% off" an'ny Scoutmob dia ny antony mahatonga ny mpanjifa demografika ambonimbony kokoa handrava ny fahazarany ary hanandrana ny orinasanao, noho izany ny hany angatahinay dia ny hanomezanao fifanarahana mahafinaritra ny mpankafy anay. Aorian'izany dia miaro anao izahay amin'ny alàlan'ny fametahana ny fihenam-bidy ary hanome vola anao fotsiny izahay rehefa manapa-kevitra ny mpanjifa fa te-hanandrana ny orinasanao.
Rahoviana aho no hisongadina? Ny ekipanay eo an-toerana dia hiara-miasa aminao ary handamina ny andro tsara indrindra hanasongadinana ny orinasanao. Avy eo, hiara-hiasa aminao izahay hamorona fanoratam-panoratana Scoutmob tokana, hiantohana fa handrenesana ny momba anao ny mpanjifanay (sy ny namany rehetra).
Mandra-pahoviana ny fifampiraharahana? Ny orinasanao no hampiavaka ny mailaka sy tranokalanay mandritra ny iray andro. Avy eo, haharitra telo volana ny fifanarahana nataonao. Amin'izay dia maika ny tolotra voafetra, saingy misy ihany koa ny fotoana ampy handehanan'ny mpanjifa finday (ary ho lasa mahazatra).
Ohatrinona ny vidin'ity? Hatramin'izao, ny fomba tokana hanaovana dokam-barotra eo an-toerana dia ny fandoavana vola amina vola mialoha, antenaina fa tratra ny hafatra, ary avy eo hiampita ny rantsan-tànanao hivezivezy amin'ny tongotra. Miaraka amin'i Scoutmob, izahay ihany no mangataka fandoavam-bola raha vao voaloan'ny mpanjifanay ianao. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny vidiny? Tsindrio eto raha hiresaka amin'ny ekipa Scoutmob momba ny vidiny.
Ahoana ny karamako? Karama amin'ny fomba tokony aloa ianao: amin'ireo mpanjifa afa-po tonga mankafy ny tolotrao. Aorian'izany, ianao ihany no mandoa anay amin'ny isan'ny mpankafy Scoutmob izay nitaky ny fifanarahana.
Tags: fifanarahana eo an-toerana
ChaCha dia mandefa ny programa sosialy